SHIRKA URURKA ISKAASHIGA ISLAAMKA (OIC) 2017
Ururka Iskaashiga Dowladaha Islaamka ee loo yaqaano Oragisational Islamic Cooperation (OIC) waxaa la aasaasay 1969-kii, waxaa loo sameeyay inuu difaaco xuquuqda Dowladaha Islaamka ah ee ay haadu boobayso, waxaa ku jira oo xubin buuxda ka ah 57 dowladood oo Muslim ah.
Wuxuu ururku shir aan caadi ahayn isugu yimid 13-12-2017 Dalka Turkiga Magaalada Istanbuul , shirkan oo shirgudoomiye ka ahaa Madaxwaynaha Tutkiga Raciep Dayib Erdugan, ayay ujeedadiisu ahayd in looga tashado arinta Maraykanku uu ugu aqoonsaday Qudus Caasimada Yuhuuda.
Shirkan ayaa waxaa furay Madaxwaynaha Turking Erdogan isaga oo ugu baaqay in maraykanaku ka noqda go’aankiisa, kaas oo u ku timaamay inuu ahaa go’aan aan laga fiirsanin, iyo in ururka islaamku Bariga Qudus u aqoonsado Magaalo madaxda Falastiiniyiinta, sidoo kale Madaxwaynaha Falastiin Maxamoud Cabaas ayaa ku tilmaamay go’aanka maraykanaka mid danbi ah.
Dadka siyasada ku xeel dheer ayaa ku tilmaamay go’aanka Trump inuu yahay mid uu ku doonayo in uu ku qeexo meesha ay ka taagan yahay Muslim nacaybka. Sida la wada ogsoon yahay markuu uu trump xafiiska aqalka cad la wareegay go’aankii ugu horeeyay ee uu soo saaro wuxuu ahaa go’aan xanbaarsanaa aflagaado iyo cunsurinimo uu kula dhaqaaqay dowlado ay ak mid yihiin Dowladaha islaamka iyo dowladaha dariska la ah ay ugu horayso Mexico.
Waxaa kale oo go'aanka Trump ka horyimid Dowladaha islaamka, Ururka Midowga yurub iyo hay’ada qaramada midoowday. sidaa daraadeed, shirkan ayaa si adag loogu dhaleeceey loona aqoonsday in Bariga Qudus ay tahay Caasimada Falastiin.